24 နာရီပဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » 24 နာရီပဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်………..
- snow htet
Posted by snow htet on Jan 26, 2012 in Copy/Paste | 29 comments
ကျွန်မမှာ ကျွန်မအရမ်းချစ်ပြီး ကျွန်မကိုအရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုကျွန်မက “ကို” လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အလုပ်မရှိသေးပါဘူး။ကျွန်မတို့ချစ်သူသက်တမ်း(၃)နှစ်ကျော်ပြီး (၄)နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီ။အိမ်ကသဘောမတူပဲချစ်ကြတာမို့
ကျွန်မက အလုပ်မရှိသေးသူမို့ “ကို” အလုပ်ဆင်းချိန် စောရင် သွားတွေ့ရပါတယ်။ ကို တို့အလုပ်က စနေနေ့ဆိုလျှင် နေ့တစ်ဝက်ဆင်းရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ မိုးချုပ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ စနေနေ့ဆို ပုံမှန်(၂)နာရီလောက်ဆိုရင် ကို့ အလုပ်ကိုရောက်နေတတ်ပါပြီ။ မိုးချုပ်ရင်လည်း မိုးချုပ်တဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေတတ်ပါတယ်။
တစ်နေ့သော စနေနေ့မှာ ကို တို့အလုပ်က(၂)နာရီလောက်ပြီးသွားတဲ့တွက် အရမ်းဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကို နဲ့ ကျွန်မ ကန်ဘောင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ပတ်လောက်ပတ်ပြီးတော့ ညောင်းလာတာနဲ့ မြက်ခင်းတစ်နေရာမှာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့တွေ စကားတွေ ရောက်တတ်ရာရာပြောပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်စိတ် ပြင်းပြလာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကို တကယ်လို့လေ ကို 24 နာရီပဲ အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲဟင် လို့ မေးလိုက်တယ်။ ကျွန်မလေ ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ။ ဘာများ ဖြေလိုက်မလဲပေါ့။ အတွေးနဲ့တင် တော်တော် ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုက မင်းနဲ့ အတူ အဲဒိအချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်… ဆိုပြီး ကျွန်မ အရှက်နည်း အချစ်ကြီးစွာ တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကို ဖြေပါပြီ။ 24 နာရီပဲ အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်။ ငရဲမကျအောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲ လုပ်နေမယ်။ ဒါမှ ငရဲ မကျမှာလေ။ ကိုယ့်ချစ်သူအနားမှာနေပြီး အချိန်ကုန်သွားရင် ကိုယ့်ချစ်သူက ငရဲမကျအောင် ကူညီမှာမို့လို့လာ။ ဒါ့ကြောင့် ကုသိုလ်ဖြစ်မယ့်အရာတွေပဲ လုပ်မယ်တဲ့။ သွားပါပြီ။ ခေါင်းကို မိုးကြိုးပစ်ပြီး၊ ရင်ထဲမှာ မြေမျိုနေသလို ခံစားရတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ ကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မက ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်လေ။ ကို က ပြန်မေးတယ်၊ မင်းရောတဲ့။ ကျွန်မ စကားတွေ ဆွံ့အခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်လိုမှ မပြောချင်တော့တာနဲ့ မပြောပြဘူးလို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ ကျွန်မသာ 24 နာရီပဲ အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေ ကျွန်မနောက်ဘ၀အထိ ကို့ကို အမှတ်ရနေအောင် ကိုယ့်ပုံစံအသံတွေကို မှတ်မိနေအောင် ကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံ၊ အသက်ရှူသံတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ သေပါရစေလို့ ပြောမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အရှက်ကြီးရှက်နေပါ တော့တယ်။ မေးမိတဲ့အတွက်လည်း မှားတယ်လို့ ထင်နေပါတော့တယ်။
– ယောက်ျားများဟာ သေခါနီးအချိန်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ကြည့်တတ်ပါသလား?
– မိန်းမတွေကရော သေဆုံးချိန်အထိ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အနီးဆုံးနေချင်ပါသလား?
– စာဖတ်သူများကရော ကိုယ့်ချစ်သူကို ကျွန်မလို မေးခွန်းမျိုးမေးကြည့်ဖူးပါသလား?
About snow htet
View all posts by snow htet →
ငါတော်သည်၊ ငါတတ်သည် ဆိုတဲ့ ငါတကောကောနေတတ်တဲ့ ယောက်ျား မျိုးသာလျှင်
ဒုတိယမေးခွန်း ကိုတော့ မမ များ အဖြေပေးကြပါလိမ့်မည်
တတိယမေးခွန်း အတွက်…. !!
အနော့်ဂျစ်တူဂို မေးကျိပါမီ ။
ဟဲ့ .. ကလေးမ
၂၄ နာရီပဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင် ဒီဆိုက်က မြန်မြန်ထွက်
အခုကော်နက်ရှင်မျိုးနဲ့ … ပိုစ့်တင်ရင်း ၂၃ နာရီကုန်သွားမှဖြင့်
မညာတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး ကိုရလို့ကံကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒါဆို ရင် သူက အမိ ကို တကယ် ချစ်တဲ့သူမျိူး လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စ လေးနဲ့စိတ်ဆင်းရဲ မနေပါနဲ ဗျာ။
ကျုပ်ကတော့.. အောက်လင့်မှာ.. အောက်ကစာအတိုင်းရေး/မေးခဲ့ဖူးတယ်..။
snow htet ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါလားဟင်င်ငင်င်…
မလိမ်နဲ့နော..။ လိမ်တဲ့သူကို.. သာဝတိံတာကလက်မခံဘူးတဲ့..။
ဥက္ကာခဲ အမှတ် RX3286 သည် နေစင်္ကြာဝဌာထဲ တနာရီမိုင်း ၁သန်း၃သိန်းနှုန်းဖြင့် ၀င်ရောက်နေသည်ဟု နာဆာမှ ကြိုတင်တွက်ထားသည့်ရလဒ်များအရဆိုပါသည်။
အဆိုပါဥက္ကာခဲသည် ကမ္ဘာ့မြေသို့ ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့ ၂၀၁၀၊ ည ၁၀နာရီ ၁၀မိနစ်တိတိတွင် ၀င်ရောက်တိုက်မိမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဥိးရေ သန်း၆ထောင်၏အသက်ကို နာရီပိုင်းအတွင်း ဖဲ့ခြွေယူသွားမည်ဟု သိပ်ပံပညာရှင်အားလုံးလိုလိုကသဘောတူလက်ခံထားပါသည်။
ကျန်လူသားနှင့်သတ္တ၀ါများမှာ အလွန်ဆုံး ရက်ပေါင်း၃၀အတွင်း ကြီးမားလှသောဒီရေလှိုင်းများနှင့်ငလျှင်၊မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတို့ကြောင့် သေဆုံးကြမည်ဖြစ်သည်ဟု တွက်ချက်ထားချက်များအရသိရှိရသည်။
အဆိုပါဥက္ကာပျံဝင်ရောက်လာမည်ကို သိရှိချင်းမှာ လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သဖြင့် လူအများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုကြီးစွာဖြင့် ဆောက်တည်မရဖြစ်ကြမည်စိုးရိမ်မိပါသဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးကြေညာမှုမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဘန်ကီမွန်းကလည်း ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများသို့ ယနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အာကာသလွန်းပျံယဉ်များသည် လကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပြိးဖြစ်သော အခြေစိုက်စခန်းသို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် သက်ရှိသတ္တ၀ါနှင့် သစ်ပင်မျိုးစိတ် ထောင်ပေါင်းများစွာကို သယ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အားလုံး၏အရေအတွက်ပေါင်းမှာ ၁သိန်းတိတိသာလျှင်ရှိသည်..။
ဖြစ်ပုံက .. အချင်း ၂၂မိုင်ရှိတဲ့ဥက္ကာပျံတခုက… အာကာသထဲကလာပြီးကမ္ဘာကိုတိုက်လိုက်မယ်..။ တိတိကျကျပြောရရင် .မြန်မာပြည်ထဲကျမယ်ဆိုပါတော့ ..။
သာမန်အားဖြင့် ဟီယိုရှီမားထိတဲ့ နူကလီးယားဗုံး အလုံး ၁သိန်းလောက်အင်အားနဲ့ညီတာမို့ .. ကမ္ဘာပျက်ပါတယ်..။ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိပဲ .. သေကို သေပါမယ်..။အဲဒီလိုစိတ်ကလေးသွင်းပြီး….
မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ စာဖတ်သူ၊ရေးသူတွေဘာလုပ်ကြမလဲ မေးချင်တာပါ..။ ဖြစ်ချင်တာလေးတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချရေးစေလိုပါတယ်..။ ၄ခုထဲရေးပေးပါ.။
နောက်ဆုံး အချိန်မိနစ်လေးမှာရော.. ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သေချင်သလဲ ဆိုတာလေးပါ… ထည့်ရေးပေးပါနော..။
မဟာ ထမိန်ကြီးဝါဒ says:
အင်း..သူကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင် ဖြစ်ချင်တာက ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ.ချစ်သူဆီကိုသွားပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ် သွားတွေ.မယ်..ပြီးတော့ ဟိုတယ်တခုကိုတက်ပြီး ကိုယ်မစားဘူးတာတွေ..စားချင်တာတွေကို မှာပြီးတ၀ကြီးစားပစ်လိုက်မယ်..ပြီးရင် ကိုယ့်ဘ၀မှာ ရန်ငြိုးရှိခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေကို ရှာပြီး သူသေကိုယ်သေလက်စားချေချင်တယ်..အဲ ကိုယ်မသေခဲ့လို.ရှိရင်တော့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ပစ်မယ်..ဥက္ကာခဲ ပိလို.တော့ မသေချင်ဘူးဗျာ…:-)
၄ခုတောင် မလိုပါဘူး သူကြီး ရယ်။ တစ်ချက် ဆိုရင်ကို လုံလောက်ပါပြီ။
အဲဒီ ဥက္ကာပျံ က ….
အမေဒီးကား ပြည်ကြီး ရဲ့ သူကြီး ရှိရာ LA မြို့ ဆီကို ဦးတည်လိုက်စေချင်တာပါဘဲ။
အဟိ … ဒါလေးများ။ ;-)
အဲ့ ကို တိုက်ရင် ဆယ်လီကွန်ဗယ်လီ ကြီး ပါသွားမှာပေါ့ ….
သဂျီး ကြွသွားတာ အရေးမကြီးဘူး ….
ဆက်လက်အသက်ရှင် ကျန်ရစ်မယ့် အရီးတို့ ဂီတို့
ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ….အဲ့လာတွေ လျောက်တွေးပီး ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ခံပါသလဲကွယ်…..
မောင် ….. မ သေသွားရင် နောက် တယောက်ထားမှာလား ဟင်င်င်င်….
တဲ့ …ကြားဖူးတာလေး…ပြန်ပြောတာပါ ….အဆိုပါ ကောင်မလေး ….ဟိုက်ဒရို ကလိုရစ် အက်ဆစ်သောက်သွားသတဲ့
ဆြာ တယောက် ပြောပြဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး…(ဖြစ်ရပ်မှန်ပါတဲ့ …..)
ကိုယ့် ဒုက္ခ ကိုယ် မရှာချင်ပါနဲ့ကွယ် ….ပေါက်ပန်း၄၀ တွေ မတွေးပါနဲ့ …
သဂျီးနာရီက နောက်ကျသကိုး …အဟတ်…..
၅နှစ်သားမှာ ..ကျုပ် နေတဲ့ ရွာ ကို သူပုန်ဝင်ပစ်ဖူးတယ်…
၁၀နှစ်သားမှာ ကျုပ်စီးတဲ့ သမ္မန် ကို သမိန်ဗရမ်း တိုက်ဖို့ နည်းနည်းလေးပဲ လိုဖူးတယ်….
၁၅နှစ်သားမှာ …ကျုပ်မောင်းတဲ့ ..ဖိုးဝှီး ..ဘီး၁လုံးကကျွတ်ကျနေတာ.. ၁၀မိနစ်လောက်ကြာမှ သိဖူးတယ်ခည..
အဲ ..အဲ့နောက် မသေကောင်းမပျောက်ကောင်းခဲ့တာကတော့ အများ သိတဲ့ နာဂစ်နဲ့ တိုးဟိုကု ငလျင် ပဲ …
သေရမှာ မကြောက်ဘူးဗျာ …ဝေဒနာ ခံစားရမှာကြောက်တယ်…
သေလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာကြီး ကို မချိမဆန့်ခံစားပြီးမှ နောက်ဆုံး အသက်ထွက်ရတာမျိုး…
သည်တော့ ၂၄နာရီအတွင်း မလုပ်ဖူးတာတွေ လုပ်ချင်တာတွေ ..
ရူးနှမ်းနှမ်းအလုပ်တွေ အကုန် စုပြုံလုပ်ပစ်မယ်ဗျာ ….
ပြီးရင်တော့…အငြင်သာဆုံး အသက်ထွက်နည်း ရွေးမိမှာအမှန်ပဲ..
မသေခင်ဒူးတနန့်နန့်နဲ့ ယမကာတစ်ကြိုက် ပန်းသီးတစ်ကိုက် နဲ့ နှပ် နေရင်းအိမ်ကဟာမကြီးနဲ့ လွတ်မဲ့ အရေး
တွေးရင်းပျော်နေမိမယ် နောင်ဘ၀မှာ နတ်သမီး လေးငါးရာနဲ့နေရမဲ့ အရေးအတွက်လဲ ရင်ခုံနေလိမ့်မယ်
စနိုးကတော့ အဲ့ဒီ့ ဥက္ကာပျံကြီး ထိပြီးတော့ပဲ သေချင်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခြားဟာတွေက အဖြစ်များပြီး
သိပံခေတ်ကြီးမှာ ဥက္ကာပျံကြီး ထိပြီးသေတာက
ဟိဟိ တစ်ခါထဲ ပွဲချင်းပြီးအောင်လို့
ကိုယ့်ချစ်သူပဲ အရမ်းမေးချင်တဲ့ စကားတွေပုံနေတာပေါ့
kokothandar လို ချစ်သူမျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့
ယောက်ျားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန် လူသားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်ပဲပြောပြော၊ ကိုယ့်ထက်တော့ ပိုမချစ်နိုင်ကြပါဘူး။
သေခါနီး ချစ်သူနဲ့ဘေးမှာ နေသွားချင်တယ် ဆိုတာကလည်း ချစ်သူကို မတွေ့မမြင်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ခံစားရမှာ ကြောက်လို့၊ ချစ်သူကို မြင်သွားချင်တဲ့ သုခကို လိုချင်လို့ ပါပဲ။
(၂၄) နာရီပဲ အသက်ရှင်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ မေးခဲ့ရင် –
မသေခင် အချိန်လေးအတွင်း ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာ မှန်သမျှကို အကုန်လုံး စုပြီး လုပ်သွားချင်ကြမှာပါပဲလို့ ကျုပ်ကတော့ ထင်တယ်။
သေရမယ်ဆိုရင်လဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သေခွင့်ရချင်တယ်
သေရခါနီး ဟိုလိုသေပါ ဒီလိုသေပေးပါ ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ မဖြစ်ချင်ဘူးဗျ
တာဝတိံသာသွားချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးနော်
(တကယ်ရှိမှန်းမသိ၊ မရှိမှန်းမသိ၊ ကောင်းမှန်းမသိ၊ မကောင်းမှန်းမသိ ?? )
ကမ္ဘာပျက်ပြီး အကုန်လုံးနဲ့အတူရောသေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှအထူးမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။
ရေပုလင်းလေးဆွဲပြီး ကမ္ဘာမပျက်ခင် သူများလာဒုက္ခမပေးနိုင်မယ့်နေရာမျိုးသွားနေပြီး
ကိုယ့်တရားလေးကိုယ်မှတ်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး သေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူများတွေ ကိုထားခဲ့ပြီး ကိုယ်တယောက်ထဲ ၂၄ နာရီအတွင်းသေရမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေကခြားနားပါတယ်။
ပျာယိပျာယာ ဟိုဟာမပြီး ဒီဟာမပြီးနဲ့ သေသွားဖို့များတယ်။
၁- အကြွေးအပါအ၀င် ကိုယ်ပေးစရာတွေကို ပေးဘို့စီစဉ်မှာကြားမယ်
၂- ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့အမှားအယွင်းတွေကို တောင်းပန်မယ် တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်းမှာကြားမယ်
၃- ကိုယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်း သားသမီး ဇနီးဆွေမျိုးစတာတွေအပေါ် ခွဲဝေပေးကမ်းမှာကြားတာတွေလုပ်မယ်။
၄-အဲဒီသုံးခုမြန်မြန်လုပ်ပြီးရင် အကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်ပြီး တရားမှတ်ဘို့ကြိုးစားမယ်။
-မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သေမယ့်နောက်ဆုံးမိနစ်လေးမှာ ဘာကိုမှ သတိမရပဲ ဘာကိုမှ စိတ်ထဲမထားပဲ
ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက စိတ်ကူးယဉ်တာပါ
တကယ်သေတဲ့လူတွေအားလုံးနီးပါးကတော့ လုပ်စရာတွေ ဘာမှမပြီးပဲ
(ဒုက္ခ ဒုက္ခ ၊ အနိစ္စဒုက္ခ၊ ၀ိပရိနာမ ဒုက္ခ)
ကိုယ့်အတွက် အသက်ရှင်ဖို့ (၂၄)နာရီပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်-
အရင်ဆုံး ခန္ဒာကိုယ်လှူဖို့ ဆေးကျောင်းကို ဖုန်းဆက်ပါမယ်…
မျက်ကြည်လွှာလှူဖို့ မျက်စိဘဏ်ကို ဖုန်းဆက်ပါမယ်…
အင်းအသက်ရှင်ဖို့ ၂၄ နာရီပဲကျန်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်စရာတွေတော်တော်များမယ်ထင်တယ်။ မှာစရာတွေ၊ ရစရာတွေ၊ ပေးစရာတွေ၊ အောင်မယ်လေး။ အများကြီးပဲ။ ၂၄ နာရီတောင်လောက်ပါ့မလားပဲ။ snow htet လို Romantic ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေးပြီးစိတ်အေးလက်အေးသေနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးမှတ် တယ်။ ချစ်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာနေပြီးလုပ်စရာတွေ၊ မှာစရာတွေတန်းစီပြီးပေါ်လာမှာမှတ်တယ်။ ရွာထဲကကော ဘယ်လိုထင်လဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတရံနေ့ခင်းနေ့လည်အားလို့ခဏအိပ်မယ်ကြံရင်အိပ်ယာ ထဲလဲရောက်ရောလုပ်စရာတွေ၊ ဖုန်းဆက်စရာတွေ၊ ဘေးအိမ်ကိုသွားစရာတွေပေါ်ပေါ်လာပြီး ဘယ်တော့ မှကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး။ အပြီးသေရမယ်ဆိုပိုဆိုးမှာပေါ့နော်။
ကိုယ်ဘယ်အချိန်သေမှာလဲဆိုတာ … ဘယ်သူမှ မသိနိုင်သလို … အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ မေးခွန်းမျိုးမေးပြီး … ရတောင့်ရခဲ အတူအနားမှာရှိချိန်တွေ ကုန်လွန်စေခဲ့တာ သတိထားမိပါရဲ့လား ။ သိပ်နှမျောစရာကောင်းပါတယ် … ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းအတွက် ပြန်ရတဲ့ အဖြေကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ တရားခံက မိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲ … ။
တကယ်ဆို ချစ်ကြသူတိုင်း ကွေကွင်းခြင်းမရှိပဲ .. ပေါင်းဖက်စေချင်ပါတယ် ….. ။ မလိုအပ်တဲ့ မာန်မာန၊ ဒေါသ ၊ အတ္တတွေ ဘေးဖယ်ပြီး … လက်ရှိအချိန်လေးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချတတ်ပါစေနော် … ။
ဘာလို့ မိဘတွေ သဘောမတူလည်း ထည့်မရေးထားပေမယ့် …. မိဘရဲ့ သဘောတူညီချက်ရဖို့ … ပထမဆုံးကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နိုင်အောင် အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်ရပါမယ် … ။ ဒါမှ ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာ ကလေးလို / လူပိုတစ်ယောက်လို မဆက်ဆံတော့ပဲ … နေရာတစ်နေရာပေးဆက်ဆံပါလိမ့်မယ် … ။ ကိုယ့်အမြင်ကို အလေးထားပြီး …. တဆင့်ပြောဆို ဆက်ဆံ ညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေ မိသားစုချင်း လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ် … ။ ကြင်နာတတ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်တတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးရပါစေနော် ။
ပြင်လို့ရမယ် ညှိလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအထက်လွန်ပေါ့
ယောင်္ကျားများလို့ ဆိုတဲ့အတွက် အကုန်လုံးကို ခြုံငုံမသိနိုင်တဲ့အတွက် မဖြေပေးနိုင်ပါ သို့သော်
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ 24 နာရီပဲ အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် …..
လုပ်ရမယ့်ဟာကို ၆ နာရီလုပ်မယ်
လုပ်သင့်တာကို ၆ နာရီလုပ်မယ်
လုပ်ချင်တာကို ၆ နာရီလုပ်မယ်
နောက်ထပ် ၆ နာရီကတော့ လုပ်ရမယ့်ဟာ၊ လုပ်သင့်တာ၊ လုပ်ချင်တာ ကို ခွဲရင်းနဲ့ ကုန်သွားလို့ပါ ….
မေးမကြည့်ပါ … မေးဖြစ်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး …
(၁) သူ စိတ် ပင် ပန်း မှာ စိုး လို့
(၂) အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးထင်လို့
(၃) မေးရမယ့်လူ မရှိသေးလို့
သေမဲ့ကိစ္စများ ၂၄နာရီ စောင့် ခိုင်းနေရသေးလား
ကို နဲ့ နှင်း နဲ့ ကတော့ မခွဲအတူ ဆိုပြီး
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အလက်စကား ကို ရောက်တုန်းက
ဒီဘ၀မှာ မွေးပေးခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့အမေကို ကန်တော့မယ်
ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တယ် လို့ပြောချင်တယ်
မန်းလေးဂဇတ်မှာ မသေခင် ပို့စ်တင်ချင်တယ်
(ပိုစ့်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ ကိုယ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြောပြချင်တယ်။)
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရွာထဲမှာ ကော်မန့်တွေပေးရင်းနဲ့ စာရေးတတ်လာတယ် ပြောရမယ်။ ပိုစ့်တင်ချင်ရင် ကော်မန့်ပေးသလိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာကိုချရေးပေ့ါ။
ရေးပြီး ပြန်ဖတ်၊ ဖတ်ပြီး လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ရင်းနဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
အခုလို ကွန်ပြူတာခေတ်ကြီးမှာ စာရေးရတာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိပါတယ်။
ပြင်လွယ် ဖျက်လွယ် မို့လို့။
ဟုတ် အစ်မ မမရေ ကြိုးစားကြည့်ပါအုန်းမယ်
၁။ ဒေါင်းလုပ် မလုပ်ဘူး
၂။ ဟမ်းဖုန်း နဲ့ ဘယ်မှမဆက်တော့ဘူး။
၃။ ကို့ ချစ်သူ့ ကို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် မပို့ပေးတော့ပါ
၄။ ကို့ ချစ်သူနဲ့ ရှော့ပင် အတူတူ မထွတ်တော့ပါ
ဘာခုမှ ကြောက်ပါပြီ လဲ ..
အဲ့လိုသာ ၂၄ နာရီဘဲအချိန် ကျန်တော့မယ် ဆိုရင် ဖြင့် ဆိပ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေ၇ာလေးမှာ တစ်ယောက်
ထဲထိုင်ပြီးတော့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ ရတဲ့ဘ၀အကြောင်းအရာလေးတွေကို တွေးပြီးတော့ နေရင်းနဲ့ 
ဘဲ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးချင်ပါတယ်။
၁။ယောက်ျားများဟာ သေခါနီးအချိန်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ကြည့်တတ်ပါသလား?
ယောင်္ကျားများသာမက မိန်းမ များတွင်ပါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ကြည့်တတ်တဲ့ သူပါသလို တခြားဖက် ကိုကြည့်ပေးတတ်သော သူများလဲ ရှိပါတယ်။ မေးခွန်းက နိမိတ်ပြ မေးခွန်း ဖြစ်နေတယ် လို့ ကျွန်တော် တွေးမိသွားတယ့် အတွက် လွန်တာရှိ ၀န္ဒာမိပါလို့ ….။
၂။ မိန်းမတွေကရော သေဆုံးချိန်အထိ ချစ်တဲ့သူနဲ့ အနီးဆုံးနေချင်ပါသလား?
မိန်းမ တွေသာမက ယောင်္ကျားများတွင်ပါ ချစ်သူနဲ့ အနီးဆုံး နေချင်သလို နားညည်းတဲ့ ဒဏ်ကို မခံချင် သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ နမိတ်ပြ လို့ပဲထင်မိပါတော့တယ်။
၃။ အတွက်ကတော့ တစ်ခါ မှ မမေးဖြစ်ဘူး။ ..
ဘွ ကကြမ်းတော့ အဲလို တွေတောင် မပြောဖြစ်ကြဘူးလေ …. ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် …
ရှင်တို့ ယောင်္ကျားတွေ ရှင်တို့ ယောင်္ကျားတွေ လို့ ပြောမယ့် အစား အော် လူတွေ လူတွေ လို့ သာပြောကြ မယ်ဆိုရင် Gender balancing လို့ ရဲရဲ ကြီး အော်လို့ အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပါပဲ …